3 Nzira dzekutarisa Yenhare IMEI Nhamba kuti uwane kana iri Yekutanga kana Yekunyepedzera
Ndichiri kutenga nhare, vanhu vazhinji vanowira mumatsotsi kwavanotengeswa mudziyo wekunyepedzera kure newavakabhadhara chaizvo. Nekudaro, kunyangwe iwe uri kutenga foni nyowani kana yakamboshandiswa, ingave iri pamhepo kana isingaenderane, zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti chishandiso ndechekutanga uye kwete chakaumbwa kana kugadziridzwa. Nzira iri nyore yekutarisa zvakafanana ndeyekushandisa iyo IMEI nhamba yedhizaini. Ichi chinyorwa chinokuudza kuti ungaita sei tarisa IMEI nhamba yefoni kuti uone kana iri yepakutanga kana yekunyepedzera.
Iyo IMEI (Yenyika Dzepasi Pose Chishandiso Chizivikanwa) nhamba inhamba yakasarudzika yekutsvaga nhare mbozha nhare. Iyo ine gumi nemashanu manhamba uye inopihwa kune yega yega zviri pamutemo foni kunze uko. Iyo IMEI nhamba inouya inobatsira paunenge uchitenga foni nyowani kana yakamboshandiswa- unogona kuishandisa kuti uve nechokwadi cheiyo runhare.
Sezvo mazhinji e-commerce saiti atanga kutengesa akagadziridzwa kana kuvandudzwa mafoni, iyo IMEI nhamba inogona zvakare kuongorora mamwe emidziyo yedhiyo. Mhando dzekunyepera kazhinji dzinogona kunge dzisina IMEI nhamba kana kushandisa yekunyepedzera.
Nekudaro, kana iwe uri kunze uko, uchitenga yakamboshandiswa kana pre-muridzi smartphone kubva kune mumwe wemuno mukomana, kana achangotenga imwe kubva kune e-commerce saiti, unogona kushandisa iyo IMEI nhamba yefoni kuti uone kana iri yekutanga, yekunyepedzera, kana yakaumbwa . Verenga pamusoro.
1. Tarisa iyo IMEI Nhamba pane iyo Runhare
Kana iwe uine foni uri munhu, unogona kutarisa iyo IMEI nhamba pafoni pachayo, uchishandisa matanho ari pazasi.
Vhura dialer pafoni.
Dhonza iyo kodhi * # 06 #.
Iwe uchaona ikozvino pop-up bhokisi rine iyo IMEI yefoni uye serial manhamba.
Tora skrini kana kuinyora pasi.
Matisa iyo IMEI uye serial nhamba neiyo inotaurwa pane yekushandisa bhokisi uye invoice Kana dzikasaenderana, pane chakakanganisika pano. Kana iwe wakaraira foni kubva kune e-commerce saiti, edza kuonana navo. Panguva iyi, unogona kuenderera nekusimbisa iyo IMEI nhamba.
Simbisa IMEI Nhamba kuburikidza neIMEI.Info
Anoverengeka wechitatu-bato nzvimbo rega iwe bvumidza IMEI ruzivo online. Iwe unogona kushandisa iyo IMEI nhamba yefoni pane aya masaiti kuti uone uye uone kana foni iri yekutanga, yekunyepedzera, kana chinhu checlone.
Vhura browser rako uye musoro ku IMEI.info.
Pano, isa foni yako 15-digit IMEI nhamba.
Pedzisa iyo captcha verse uye tinya pa Tarisa.
Ichakuratidzira iwo ruzivo rwefoni, kusanganisira iyo modhi yefoni uye nhamba yemodheru. Iwe zvakare uchaona iyo modhi kuburitsa zuva uye zvirevo.
Uyezve, unogona kushandisa saiti kuti utarise kana foni yakanyoreswa.
Ngwarira kuenzanisa zita remodhiyo, nhamba, uye maratidziro anoratidzwa pane ino saiti nefoni. Kana iwe ukaona chimwe chinhu kunze kwekutaura kwefoni yako, ingangove yeyenhema kana yekunyepedzera unit.
Iyi ndeimwe yenzira dziri nyore dzekuwana kana foni iri yekunyepedzera kana yekutanga uchishandisa iyo IMEI ruzivo. Nekudaro, kuti uve nechokwadi chizere, iwe unogona kuenderera mberi nekuyambuka-tarisa ruzivo pane iyo saiti yekugadzira foni
3. Yambuka-Tarisa Ruzivo rweFoni pane iyo Mugadziri Saiti
Anenge ese makambani makuru e-smartphone anorega iwe uwane warandi yefoni, zuva rekumisikidza, uye rumwe ruzivo nerunhare rweIMEI kana serial nhamba Unogona kuongorora kana foni iri yechokwadi kana kuti kwete uye woongorora kana chiri chinhu chakagadziridzwa.
Saka, enda kune warandi cheki peji pane saiti yemugadziri (zvinongedzo pazasi) uye nyora yako IMEI nhamba kana serial nhamba. Pano, iwe unogona kuona kuti yakawanda sei garandi yasara uye apo foni yakavhurwa. Kunyangwe ikasaratidza zuva rekumisikidza, unogona kuwana zano rezvakafanana neakasara garandi ruzivo.
Kana iwe wakatenga chigadzirwa chinyowani asi webhusaiti yemugadziri inoti yatove yakamisikidzwa kare- ingangove mudziyo wakashandiswa kana kugadziridzwa.
Apple Warranty Tarisa- https://checkcoverage.apple.com/
Xiaomi Chigadzirwa Kusimbiswa- https://www.mi.com/global/verify/#/en/tab/imei
Realme Runhare Ruzivo, Nguva Yekuita- https://www.realme.com/in/support/phonecheck
Oppo Warranty Tarisa- https://support.oppo.com/in/warranty-check/
Vivo Warranty Tarisa- https://www.vivo.com/in/support/IMEI
Huawei garandi Mamiriro- https://consumer.huawei.com/in/support/warranty-query/
Asus Warranty Mamiriro- https://www.asus.com/in/support/warranty-status-inquiry/
Motorola (Nyoresa uye shandisa chishandiso) - https://accounts.motorola.com/
Zano- Ziva kana Nhare Yako Yakagadziridzwa (iPhone Chete)
Pane iPhone, tsamba yekutanga yemuenzaniso nhamba inotsanangura kana iyo iPhone yakatengwa nyowani, yakagadziridzwa, yakatengeswa sechigadzirwa chakasarudzika, kana chinhu chinotsiva. Uchishandisa iyo, unogona kuona kana iyo iPhone iri nyowani yekutengesa chinhu kana yakagadziridzwa imwe.
Open Settings pane iyo iPhone. Dzvanya pa General >About. Pano, tarisa iyo Model Number uye kana tsamba yayo yekutanga ichienderana neimwe yetsananguro pazasi:
M: Retail unit, yakatengwa nyowani kubva kuApple.
F: Yakagadziriswa neApple kana mutakuri.
P: Yakagadzirirwa (yakanyorwa) unit.
N: Chishandiso chinotsiva chisina kushanda iPhone.
Ziva kuti kuve nenhamba yemuenzaniso inotanga na M hazvireve hazvo kuti iyo iPhone haina kumbogadziriswa kana kugadziridzwa. Inogona kunge ichiri kuburikidza nekugadziriswa nevasina kubvumidzwa vapi vevashandi.
Kuputira Kumusoro- Shandisa IMEI kutarisa kana Runhare rwuri rwekutanga kana rwekunyepera
Izvi zvese zvaive zvekutarisa iyo IMEI nhamba yefoni kuti uone kana foni iri yekutanga kana kunyepa. Eheka, usavimba zvizere nenhamba yeIMEI sezvo ichigona kuumbwa- iyo imwechete IMEI inogona kushandiswa kune akawanda mafoni.
Nekudaro, tevera kumwe kuongorora, kusanganisira kutaridzika kwefoni, software, mashandiro, uye maficha. Gara uchitenga nhare kubva kunzvimbo dzechokwadi. Zvakare, unganidza invoice uye ID kana uchitenga kubva kumutengesi wemuno kana kumisika senge OLX uye Quickr.
Yakagadziridzwa malaptop UK 2020: Zvese zvaunoda kuti uzive usati watenga patsva laptop